Sir Richard Branson ayaa ku guuleysanaya tartanka Badbaadinta ee loogu talagalay Virgin Atlantic
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Sir Richard Branson ayaa ku guuleysanaya tartanka Badbaadinta ee loogu talagalay Virgin Atlantic
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Xitaa nin sida Sir Richard Branson ah, milkiilaha shirkadda Virgin Atlantic malahan kubad qurxoon marka laga hadlayo dhaawaca cudurka COVID-19 uu u geysanayo warshadaha duulista oo ay ku jirto shirkadiisa. Iftiinka dhamaadka tunelka ee tallaalka iyo xoogaa caawimaad ah ayaa la arki karaa
Shirkad fadhigeedu yahay UK oo la yiraahdo Virgin Atlantic ayaa qarka u saaran inay uruuriso $ 223 milyan oo maaliyad cusub ah, afhayeenad u hadashay shirkadda Sir Richard Branson ayaa ku tiri hadal emayl ah.
"Waxaan sii wadeynaa inaan xoojino miisaaniyadayada isku dheelitiran iyadoo lafilayo in laga qaado xayiraadaha safarka caalamiga ah inta lagu gudajiray rubuca labaad ee 2021", ayay tiri afhayeenka.
Maalgelintii ugu dambeysay waxay daba socotaa dhameystirka shirkadda diyaaradda bishii Janaayo ee iibka iyo dib u soo celinta labo Boeing 787s oo qeyb ka ah qorshe lagu xoojinayo miisaaniyadda.
Heshiiska lala galay Griffin Global Asset Management si wax yar oo ka badan $ 230 milyan looga soo ururiyo labada diyaaradood ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo Virgin Atlantic inay dib u bixiso amaah lagu qaatay qayb ka mid ah heshiiskeedii badbaadinta sanadkii hore.
Kordhintii ugu dambeysay, Branson's Virgin Group ayaa lagu wadaa inay bixiso qiyaastii 100 milyan oo ginni halka 60ka milyan ee soo hartayna ay ku jiri doonaan dib u dhigis, sida laga soo xigtay Sky News, oo markii ugu horreysay soo warisay horumarka.
Bishii Nofeembar, shirkaddu waxay sheegtay in heshiiskeeda badbaadinta ee 1.2 bilyan oo laba bilood ka hor la hubiyay ay ka dhigan tahay in shirkaddu ay sii noolaan karto xitaa haddii xaaladda safarku ay ka sii darto.
Qiimaha dhimista Virgin ee 335 milyan ginni sanadkii hore, madaxa shirkadda Shai Weiss ayaa u sheegay dhacdadii warshadaha diyaaradaha bishii Nofeembar. Waxay sidoo kale shaacisay 4,650 oo shaqo lumis ah intii lagu jiray aafada, kala badh shaqaalaheeda, waxayna yaraysay raxankeedii.